अनिता र राजलाई पावरलिफ्टिङको उपाधि - Khelpati
मगलवार, चैत्र ३१, २०७७ खेलपाटी संवाददाता
काठमाडौं । अनिता महर्जन र राज शाहीले स्व. निलकण्ठ नारायण मानन्धर स्मृती चौथो आन्तरिक पावरलिफ्टिङ प्रतियोगिताको ट्रफी उचाल्न सफल भएका छन् ।
नेपाल ब्यायाम मन्दिरले नयाँ वर्षको उपलक्षमा आफ्ना पूर्व सदस्य स्व. निलकण्ठ नारायण मानन्धरको स्मृतीमा आयोजना गरेको प्रतियोगिताको महिलातर्फ अनिता र पुरुषतर्फ राज च्याम्पियन बनेका हुन् ।
अनिताले उपाधि जित्ने क्रममा स्क्वाटमा ९० केजी, बेन्च प्रेसमा ५२ केजी र डेडलिफ्टमा १०० केजी गरि कुल २४२ केजी उचालिन् । अनिताले मेडल, प्रमाण पत्र, ट्रफीका साथै नगद ६ हजार प्राप्त गरिन् ।
नेपाल ब्यायाम मन्दिरको आन्तरिक खेलाडीहरुकाबीच गरिने प्रतिस्पर्धामा दोश्रो स्थानमा बविता लामा रहिन् । उनले स्क्वाटमा ५० केजी, बेञ्च प्रेसमा ५० केजी र डेडलिफ्टमा १०५ केजी गरि कुल २०५ केजी उचालिन् । लामाले नगद ४ हजार सहित मेडल, प्रमाण पत्र र ट्रफी प्राप्त गरिन् । यस्तै तेश्रो स्थानमा रहेकी चन्द्रकला मुनकर्मीले ८० केजी, ४० केजी, ८० केजी गरि कुल २०० केजी उचालिन् ।
मुनकर्मीले नगद ३ हजार, मेडल, प्रमाण पत्र र ट्रफी प्राप्त गरिन् । महिलालाई खेल तर्फ आकर्षित गर्ने उद्धेश्यले चौथो स्थानमा रहेकी सुदिक्षा राज्य लक्ष्मी शाहले सान्त्वना स्वरुप नगद १ हजार र प्रमाण पत्र प्राप्त गरिन् ।
नेपाल ब्यायाम मन्दिरको आफ्नै हलमा भएको प्रतिस्पर्धामा पुरुषतर्फ राजले स्क्वाट तर्फ १५० केजी, बेञ्च प्रेसमा १२० केजी र डेडलिफ्टमा १८५ केजीका साथ कुल ४५५ केजीका साथ स्वर्ण प्राप्त गरेका हुन् । दोश्रो स्थानमा रहेको सविर परियारको पनि समान ४५५ केजी रहेता पनि तौल वजनका कारण शाहीले प्रथम स्थान प्राप्त गरेका हुन् ।
शाहीले नगद १४ हजार, मेडल, प्रमाण पत्र र ट्रफी प्राप्त गरे । दोश्रो भएका परियारले १६५ केजी, १०५ केजी र १८५ केजीका साथ ४५५ केजी उचाले । उनले नगद ९ हजार, मेडल, ट्रफी प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । तेश्रो स्थान प्राप्त गर्ने ढुकसान लामाले १४५ केजी, १०५ केजी र १८० केजीका साथ ४३० केजी उचाले । उनले नगद ६ हजार मेडल, प्रमाण पत्र र ट्रफी प्राप्त गरे । ४३० केजीनै उचालेका संदीप पुजारी चौथो भए । उनी तौल वजनका कारण चौथो भएका थिए । उनले १४० केजी, ११५ केजी र १७५ केजी उचालेका थिए ।
प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ १३ र महिलातर्फ ४ खेलाडीहरुले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।